Home CARRUURTA OTAANIA FOOTBALL Suugaanta Sheeko ee Carruurta Mooyee Sheeko Xaqiiq ah
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius Genius kaas oo si fiican ugu caansan magaca Nickname; "Madaxa Sare". Maqaarka Haaruun ee Mooyee iyo akhbaaraha aan la isku qorin xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu leeyahay awoodiisa hoggaankiisa, lakiin dhowr ka mid ah tixgelinayaan Aaron Mooy's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Nolosha Hore
Aaron Frank Mooy wuxuu ku dhashay maalinta 15th ee September ee Sydney, Australia. Markii uu dhashay, waxaa loo magacaabay Aaron Kuhlman mana aha Aaron Mooy. Hooyadiis Nederland waxay bedeshay magaceeda markii ay kala soocday aabihiis markii uu yaraa Mooyey. Xaqiiqdii, Mooy ayaa kaliya aragtay aabihiis hal mar - ka dibna kaliya gaaban marka uu ahaa socod baradho.
Xiisada, barbaarinta sariirta ayaa ku dhacay jacaylka kubadda cagta iyo waalidkiis waxay kobcisay jaceylkaasi. Kadibna, wuxuu kufsaday inuu daawado kubada cagta ee habeenkii Australiya (Premier League) oo ku saabsan TV-ga iyo ka careysiisay. Mooy ayaa xitaa tagi doona suuqyada waxaana uu ku biirayaa kooxda Manchester United ee horyaalka Premier League. David Beckham wuxuu ahaa kan ugu jeclaa, mar kasta oo uu ku jiray TV TV Aaron waa inuu daawadaa. Ka dib markii uu daawaday Beckham, waxa uu tababar ku qaadan doonaa laad xor ah, islamarkaana iska dhigo inuu yahay.
Sida kubada cagta ayaa qeyb weyn ka noqotay nolosha caruurnimadeeda, Aaron ma joojin karno inuu ku fekero inuu noqdo ciyaaryahan. Wuxuu ku biiray Machadka New South Wales ee Sportiga (NSWIS), oo ku yaala Sydney Olympic Park si uu u bilaabo xirfadiisa dhalinyarada.
Mooy ayaa raacay wadada wanaagsan ee ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah wuxuuna noloshiisa ku riday da 'yar si uu u dabaaldego riyadiisa. Waxa uu ka tegey Australiya da'da 15 leh qufulo qorrax leh iyo rabitaan guban sida hoos ku sawiran.
Wuxuu mustaqbalkiisa ku bilaabay Yurub isagoo ah aqoonyahan dhalinyaro ah oo Bolton Wanderers ka dib markii lagu arkay Chris Sulley. Aaron Mooy ayaa diiday heshiis kordhinta Bolton bishii July 2010 isagoo raadinaya ciyaaro kubadda cagta ah. Kadib wuxuu ku biiray Scottish Premier League kooxda St Mirren on 23 Oktoobar 2010. Xoogaa, Mooy kadibna wuxuu u dukaamiyey Scotland ka hor inta uusan ku laaban guriga 2012 si uu ugu biiro Western Sydney Wanderers ee A-League.
2016, waxa uu dib ugu soo laabtay England si uu ugu ciyaaro Manchester City. Halkaas, wuxuu ka yimid deyn si joogto ah u degay magaalada Huddersfield Town. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Nolosha Xiriirka
Aaron Mooy ayaa la kulmay jacaylkiisa noloshiisa, Nicola oo 2011 intii uu ku sugnaa kooxda St Mirren FC Aaron iyo Nicola koray wada jir jeclahay iyo isafgarad. Waxay tixgeliyaan xiriirkoodu inuu yahay abaabul weligeed ah.
Sida waalid kasta oo cusub, Aaron Mooy noloshiisii ​​ayaa u jeestay markii ilmo kowaad uu dhashay. Xiddiga Australia wuxuu lahaa sababo ka badan inta badan waqtiyada xasaasiga qoto dheer. Waxaan kuu sheegeynaa sababta ...
In uu erayada... "Hadda waxaan leeyahay caruur (Sky) waxaan fahamsanahay inta aan jeclahay ilmahayga. Waa wax laga xumaado. Wixii isaga u waxaan rabaa inaan arko, sida aabahay. Xaqiiqdii, anigu ma fahmin. Hadda waan ku faraxsanahay. Waagii hore, ma rabo inaan ka sii fekero mar dambe. Waxaan si joogta ah uga fekeray kubada cagta iyo hadii aan lahaa kulan xun waxaan ka fekeraa maalmahaas. Hadda waxaan haystaa ilmahayga, waana maskaxdayda, " Aaron Mooy ayaa yiri.
Halyeeygii hore ee Sydney Wanderers iyo xiddiga Melbourne City ayaa markii ugu horeysay la kulmay Nicola ee 2011 waxayna ku farxeen inay xirxiraan. "Waxay ugu dambeyn aniga iyo xaaskeyga! Waa maalin qurux badan, " ayuu ku qoray Instagram.
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Nolosha Qoyska
Inkasta oo uu qoyskiisu kacsan yahay, Mooy wuxuu ku koray qoys jecel, iyada oo hooyadiis geesinimo leh ay siinayso laf dhabarka, oo ay weheliso tallaabo daajis ah, Alan Todd oo uu Aaron jecelyahay. Aabaha aabbaha Haaruun wuxuu ku dhashay Jarmalka. Mar haddiiba, Haaruun waxay go'aansadeen in ay la kulmaan aabihiis aabihiis markii uu doonayay in uu saxiixo on column ah ee weli weli in la qaato baasaboor Dutch.
Sida Haaruun u yeelay; "Waxaan la kulmay hal jeer si aan u helo isaga oo saxiixa foomamka baasaboorkeyga Dutch, taas oo ahayd waqtiga keliya" Mooy ayaa yiri ...."Waxa ay aheyd ka hor inta aan u aaday England, sidaasi darteed waxaan ahaa 14. Waxay ahayd mid kooban. "
Markii uu la kulmay walaalkiis: Markii uu joogay xarun wax iibsi ah oo lala yeeshay wiilasha reer galbeedka Sydney Wanderers iyo ilmahan ayaa u yimid isaga oo ku yidhi, 'Hada waxaan ahay Kuhlman, waxaan leenahay aabe isla markaana hooyadeyna sawiradaada ku heshay sida ilmo'. Haaruun Mooy ..."Waan naxay, lumay erayada, runtii runtii maaha. Waan ogaa inuu lahaa caruur laakiin wax fikrad ah kama helin inta uu le'eg yahay ama da '. Uma maleynayo inaan waligay la hadli doono. Xitaa sida ilmo aan dooneynin inuu ogaado, marwalba waan ka niyad jabay, waxay ahayd waqti dheer oo aan laheyn wax xiriir ah. Xaqiiqdii, xusuusta ugu horeysa waa ciyaar kubada cagta ah oo Carlingford Redbacks ah oo aan la joogo macalinka. "
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Xaqiiqooyinka Tattoo
Aaron Mooy wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsi ahaantiisa.
Xoogaga Aaron Mooy: Waa daacadnimo (xiriirka iyo xirfad-xirfad leh), falanqeyn, nooca, aad u adag oo shaqeynaya.
Hargeisa Moogoow: Wuxuu ka walwalsan yahay wax badanna wuu shaqeyn karaa maalin kasta isagoo aan ciyaarin.
Waxyaabaha uu jecel yahay Aaron Mooy: Tijaabinta timaha, xayawaanka, cunto caafimaad leh, buug, dabeecada iyo nadaafadda
Waxyaaba Aaron Mooy jacayl: Ballanqaadka, weydiisashada caawimo, qaadashada marxalada xarunta.
Soo koobid, Haaruun waa qof had iyo goor u fiirsada faahfaahinta ugu yar iyo dareenkiisa qoto dheer ee bani-aadmiga ah isaga oo aad uga taxaddaraya waxqabadka nolosha.
Mooy wuxuu ka mid yahay dhaxalka Holland, iyo garabka bidix, wuxuu leeyahay erayada "Leven, Lachen, Liefde" tattooed, kaas oo u turjumaya "Live, Jacayl, Laughing". Hooyadiis, Sam, waxay leedahay ereyada isku midka ah ee curkeeda.
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Wuxuu tagay isla dugsiga sare ee Harry Kewell
Westfield Sports High, oo sidoo kale loo yaqaano Factory Football Factory, ayaa leh sumcad si loo soo saaro xiddigaha isboortiga ee ugu fiican Australia. Kewell wuxuu ahaa arday ka qalin jabisay dugsiga sare isla markaana Mooyi
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Sheeko sharaf leh
Madaxa mooyee ee mooyadu waa mowduuc ka mid ah heesaha Huddersfield Town. Sung si aad u heesatid Boney M's 1978 hit This waa sida tani .."Hooray! Hooray! Waa Holi-Holiday! ", gabaygu wuu socdaa, "Aaron Mooy, Aaron Mooy. Aaron, Aaron Mooy. Ma lahan timo, laakiin ma daryeeli karno. Aaron, Haaruun Mooye. "
Aaron Mooy Hooyo Hore Sheeko Xaqiiqo Weedho Xaqiiq ah -Hmarkii ugu horreysay tan iyo markii 1972 uu ku biiray Huddersfield Town
Huddersfield Town ayaan la fileynin inay ku guuleystaan ​​inay ku guuleystaan ​​horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, lakiin Moy waxa uu ku qeylinayaa magiciisa khadka dhexe, kooxda ayaa ku soo laabatay kaalinta koowaad markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan 45. Intii lagu jiray wadada, Mooy ayaa dhaliyay afar gool, oo ay ku jirto rigoore muhim ah ay ka laheyd Reading kulankii ugu dambeeyey ee 2016-17.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Haaraan ee Maqnaanshaha sheekooyinka iyo xaqiiqooyinka aan ku qorneyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Taariikhda Kubadda cagta ee Australia
Xusuus-qorka Kubadda Cagta Brighton iyo Hove Albion
Huddersfield Town Taariikhda Kubadda Cagta
Sheekada Carruurnimada Aaron Connolly Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarin
Harry Kewell Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 22, 2020